GLOBAL BEAUTIES ရဲ့တရားဝင် WEBSITE က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ​ရွှေအိမ်​စည်​ရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာများ – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီ​ဇင်​ဘာလ ၇ ရက်​​နေ့က ပိုလန်​နိုင်​ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ Miss Supranational 2018 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ Miss Golden Land Myanmar အလှမယ် ရွှေအိမ်စည်က မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး အ​ကောင်းဆုံးကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်​ခဲ့တာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်တပ်တစ်အားနဲ့ အများကြီးပံ့ပိုးခဲ့တဲ့ ရွှေအိမ်စည်ကိုတော့ အနည်းဆုံး ဆုတစ်ခုခု မျှော်မှန်းထားပေမယ့် Top 25 နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ။ မနေ့ကတော့ Global Beauties ရဲ့တရားဝင် Website ကနေ Miss Supranational က ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ အကုန်လုံးရဲ့အကြောင်းတွေကို ထုတ်ပြန်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် Global Beauties ရဲ့ တရားဝင် Website ကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ မြန်မာအလှမယ် ရွှေအိမ်စည်ရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Global Beauties ရဲ့ တရားဝင် Website ကတော့ “21st place: Myanmar ( Shwe Eain Si) Undeniably beautiful but what she lacked was the grace and charm ofabeauty queen. From beingaheavy favorite to being in the bottom of the top 25, what were the attributing factors? Lack of stage presence? Rarely smiling? A less than friendly demeanor? Or is it because she crossed the line by not showing respect to pageant officials by skipping an event without informing her chaperones and breaking pageant rules by smoking in her room. Suchabeautiful girl but this attitude is not what we expect fromaBurmese representative.”
ရွှေအိမ်စည်ဟာ အမှန်တကယ်ကိုပဲလှပတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာငြင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အလှမယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ နဲ့ ကျက်သရေကတော့ သူမမှာ ချို့တဲ့နေပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေ အကြီးအကျယ်သဘောကျတဲ့ အလှမယ်ကနေ top25 ရဲ့အောက်ကို ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းအရင်းဟာ ဘာကြောင့်ပါလဲ? စင်ပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေမှုအားနည်းလို့လား? အပြုံးနည်းလို့လား? ဖော်ရွေမှုမရှိလိ်ု့လား? ဒါမှမဟုတ်လည်း သူမရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို အသိမပေးဘဲ ပွဲတွေကို တက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့လို့လား နောက်ပြီးတော့ အလှမယ်တွေရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖောက်ဖျက်ပြီး အခန်းထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်လို့လား။ အမှန်တကယ်ကို လှပတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမယ့်လည်း မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆီက ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ အပြုအမူတော့မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုပြီး မြန်မာ့အလှမယ်ရဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေသိအောင် ထုတ်ပြောလာပါတယ်။
Global Beauties ကပြောလာတဲ့ တစ်ခြားသော နိုင်ငံတွေရဲ့အလှမယ်အကြောင်းတွေကတော့ ဂုဏ်ယူလောက်စရာ ပီတိဖြစ်စရာတွေ ပြည့်နေပေမယ့် မြန်မာအလှမယ်ကိုထုတ်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ စိတ်ကျေနပ်စရာ မကောင်းခဲ့ပါဘူး။ မိုမိုလေးချစ်ပရိသတ်တွေရာ Global Beauties ရဲ့တရားဝင် Website ကနေ ထုတ်ပြောလာတဲ့ အဆိုပါအကြောင်းကို ဘယ်လိုထင်မြင်မိကြလဲဆိုတာ ပြောသွားခဲ့ပါဦးနော်။
Source;Global Beauties’s Official Website
"အရမ်းနန့်​ဖို့ ဘဝကကံမပါလာဘူး" ဆိုတဲ့ မထက်​
ရိုးရိုးလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်ရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေ
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဒီဇင်ဘာလ (၂၉) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်